Ka-qaybgalka Dawladda cusub ee Hoggaanka Xisbiga KULMIYE oo shuruud lagu xidhay | Xarshinonline News
Ka-qaybgalka Dawladda cusub ee Hoggaanka Xisbiga KULMIYE oo shuruud lagu xidhay
Hargeysa, (Nnn)- Xoghayaha guud ee Xisbiga talada la wareegaya ee KULMIYE Mr. Keyse Xasan Cige, ayaa ka warbixiyay kulamo ay yeesheen hoggaanka sare ee Xisbiga KULMIYE iyo Madaxweynaha la doortay ee Somaliland, isla markaana wuxuu sheegay in Madaxweyne Siilaanyo aqbalay soo-jeedintii Guddida ee qaab-dhismeedka Dawladda.
Mr. Keyse Xasan Cige oo Khadka Telefoonka ugu waramay Wargeyska Ogaal, ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay saami-qaybsiga Beelaha Somaliland iyo tirada xilalka Wasaaradaha ee loo jeediyay Madaxweynaha, damaca siyaasadeed ee hoggaanka Xisbiga ka haya in ay Dawladda cusub ka mid noqdaan iyo kulamo ay hoggaanka Xisbigu ka lahaayeen arrintaas.
Muuse Biixi Cabdi, Guddooyaha 1aad ee Kulmiye
Ugu horrayn, Mr. Keyse oo aanu wax ka waydiinay jiritaanka warka tibaaxaya in Madaxweynaha la doortay uu hoggaanka Xisbigooda ku wargeliyay in aanu ku darayn Dawladda cusub, ayaa wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi, “Horta, wax War ah oo cad oo ku saabsan in Hoggaanku uu ku hadhayo Xisbiga oo ay isla gaadheen Xisbiga hoggaankiisu ma jiro, oo dee hoggaanku go’aan buu gaadhi lahaa oo wuxuu odhan lahaa hoggaanku ha hadho, balse wax go’aan ah oo ilaa hadda laga gaadhay ma jiro. Hase yeeshee, kollayba wuu jirayaa dareenka ah in aan Xisbiga marnaba madhnaanin oo aanu cidla noqonaynayn. Qof kastaana aragtidiisa ayuu qabaa. Gole Wasiir oo la soo saaray oo aad ka dhex arki karto cidda ku jirtaana ma jirto ilaa hadda. Markaa waa saadaal iyo male-awaal uun. Hase ahaatee, arrintaasi waa arrin laga doodayo oo ilaa hadda hoggaanka Xisbigu ka wada hadlayo oo aan laysla meel dhigin.
C/raxmaan C/qaadir, Guddooyaha 2aad ee Kulmiye
Mar la waydiiyay sababta keentay in laga doodo arrintan ay macnaheedu tahay in masuuliyiinta u sarraysa Xisbiga KULMIYE ay dhammaantood qabaan damac siyaasadeed oo la xidhiidha inay ka mid noqdaan Xukuumadda cusub ee la dhisayo, ayaa wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi, “Dabcan, bani’aadamku kollayba way leeyihiin aragtidiisa, damaciisa iyo hiigsigiisa, waana wax qof walba u gaar ah. waxase iyana jirta arrintii guud ee Xisbinimadii, taladii guud iyo hoggaankii guud ayaa jira. Markaa in laga wada hadlo sidee ayaa wax loo maarayn karaa, meeshay ku jirtaa. Laakiin, qof kastaa damac waa leeyahay.”
Sidoo kale, mar aanu waydiinay in ay jiraan kulamo ay arrintan ka yeesheen shalay iyo waxyaabaha gaar ahaan lagaga hadlay, ayaa wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi, “Horta, siyaasadda KULMIYE lagu yaqaanaa waxa weeye in uu wax dhegaysto oo qof waliba wuxuu doono odhan karo, waxyaabaha aanu Xisbiyada kale kaga duwanahayna waxa weeye in lays dhegaysto oo xor la yahay. Sidaa daraadeed, ilaa hadda waxaanu aaminsanahay in uu dhegaysigii meesha ku jiro, waanaga u bandhignay Umadda nooca dawladdu noqonayso iyo 100-ka maalmood ee u horreeya waxa la qabanayo. Tan lafteeda Madaxweynuhu wuxuu yidhi, waxa wanaagsan in aynu meel walba wax ka eegno oo aynu Aqoonta iyo Bulshadaba eegno, maadaama aynu ballan-qaadyo samaynay oo ay Barnaamijkeenii ku jirtay inaynu isbedel samayno, maaha in wax walba lagu degdego ee waa in dhinac walba laga eego oo marka u dambaysa wax nadiif ahi yimaadaan.” Waxaanu intaa sii raaciyay oo uu yidhi, “Dabcan waa in aanu dadweynaha aragtiyo badan ka helno oo aanu aragtiyo badan eegno, waa in hoggaanka laftiisu fikrado badan keeno; haddii aynu galno Dawladdii Xisbigu muxuu ku dambaynayaa, haddii aynu Xisbiga ku hadhno, Dawladdu ma inaga maarantaa. Ileen dadkan hoggaanka ku jiraa waa ilihii ugu waynaa ee Xisbigu lahaa ee ama hayay talada ama hayay khibradda ama xogta. Markaa dawladda cusub markay timaaddo, ninka cusub ee aan Xisbiga hore ugu jirin ama aan hoggaanka ka jirin siduu u shaqaynayaa. Sidaa darteed, mar walba waxa laga hadlayaa wax-toosin ee yaan loo arkin khilaaf, ma jiro khilaaf.” Hase yeeshee, mar kale oo aanu sii waydiinay in shalay kulan ay arrintan ka yeesheen, ayaa wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi, “Dhawr jeer ayaanu, maantana (shalay) waanu kulanay, laakiin, wax laysla meel dhigay ma jirto, waxaan ahayn dooddaas guud.”
Mar uu ka jawaabayay Xoghayaha guud su’aal nuxurkeedu ahaa in haddii talooyinka badan ee ay urursanayaan ama natiijada kulamadani ay shuruud yihiin, isla markaana ay noqdaan in hoggaanka Xisbiga KULMIYE aanu ka qayb-geli karin dawladda cusub ay damacaa la noqonayaan, ayaa wuxuu yidhi Mr. Keyse, “Haddii laysla garto oo Madaxweynaha iyo hoggaanka kale isla gartaan in hoggaanku uu hadho, waa lagu khasban yahay, waxay ku xidhan tahay uun aragtida, jawaabaha iyo isla meel-dhigga hoggaanka. Sideedabana, wuxuu Dastuurka Xisbigu qorayaa in marka masuul xil hayaa uu xil kale qabto, wuu luminayaa xilkaas. Tusaale ahaan, aniga oo Xoghayaha guud ah markaan Wasiir noqdo, waan luminayaa xilkii hore ee Xoghayenimo ee aan hayay. Mid walbana waa sidaa, maahana wax laga murmayo. Hase yeeshee, waxa meesha ku jira qodobka ah, waar sidee baynu u badbaadinayaa Xisbigii iyo Dawladdiiba, wax khasab la yidhaahdaa ma jiro. Anigu maanta waan ka tegi karaa xubinimada Xisbiga oo Dastuurkaa ii ogolaanaya, waanan joogi karaa oo waan ilaalin karaa Xisbiga. Laakiin, waxa weeye sidee ayaynu xisbiga u badbaadin karnaa, ileen labadii dhinacba waa laynooga baahan yahaye.”
Xoghayaha guud waxaanu waydiinay shakhsiyan maadaama uu ka mid yahay hoggaanka arrintani saamaynayso midka uu door-bidayo in uu xil ka qabto Xukuumadda cusub iyo in uu sii ahaado Xoghayaha guud ee Xisbigaas. “Qof waliba horta isaga ayay gaar u tahay oo waa u shaqsi, hase yeeshee, waxay ku xidhan tahay hadba qofku meesha uu ku waxtar badan yahay iyo kaalinta ugu wayn halka uu ka qaadanayo, ma dhinaca Xisbiga, mise dhinaca Xukuumadda. Taasina, waxay ku xidhan tahay dawladda imanaysa Xilka ka bannaanaanayaa ma yahay mid aad ka soo bixi karto oo iyana qodob kale ah, ileen xil walba kama bixi kartide. Adigoo Suxufi ah, haddii lagu yidhaahdo Hawlaha guud baa bannaan, maxay qiimo kuu leedahay? Markaa waa inaad joogtaa ka aad wax ka tarayso. Sidaa darteed, anigu ilaa iyo hadda waxaan ku jiraa uun dooddaas oo talo-wadaaggaas ayaan ka mid ahay oo wali go’aan maan gaadhin.”
Mr. Keyse waxyaabaha kale ee aanu waydiinay halka ay ku dambaysay soo-jeedintii Guddida ka talo-bixinta qaab-dhismeedka Dawladda ee tirada iyo habka Xukuumadda cusub iyo in Madaxweynaha la doortay aqbalay soo-jeedintaas, mar uu arrintaa ka jawaabayayna wuxuu yidhi, “…imika tiradii Wasiirada waa la yareeyay, tallaabada labaad waxay noqonaysaa in tiradaa yari ay noqoto kuwo tayo leh oo iyana u baahan in loo hawl-galo, markaa Xisbigii sidii uu u ballan-qaaday siyaasaddiisa wuu ku socdaa. Midda kale, waxa jira duruufo badan oo markaad wax go’aamiso way jirayaan duruufo badan oo kaa hor imanaya. Somaliland waad ogtahay oo Beelo faro-badan ayay leedahay, mararka qaarkood waxa jira duruufo aanad ogolaateen oo mararka qaarkood kugu khasbaya in aad yeesho adigoo meelo badan wax ka eegaya, adigoo eegaya rabitaankii Beesha iyo tii dadweynaha. Markaa awoodda waxa leh Madaxweynaha oo sharcigaa siinaya, laakiin, soo-jeedintii ay guddidu soo jeediyeen waa la fuliyay. Balse, wixii intaa ka baxsan ee uu ka gudbayo ama tirade haddii uu kordhinayo waxay ku xidhan tahay Madaxweynaha oo inta uu doono ayuu ka dhigan karaa oo wuu kordhin karaa, awoodna wuu u leeyahay, isaga oo eegaya duruufaha ku gedaaman.”
Su’aal nuxurkeedu ahaa in uu Xoghaye guud ahaan qabo in tirada loo jeediyay Madaxweynaha ee Wasaaradaha iyo saami-qaybsiga Beelaha dalku is-iman karaan, ayaa wuxuu kaga jawaabay oo uu yidhi, “Markaad dhinac ka eegto haa, waayo qasab maaha in Beeli wada qaadato saddex ama afar, haddii la yidhaahdo Beel walibay labadaada ama xabbaddaada qaado, way ku filan tahay oo waa la farsamayn karaa. Ileen mar wax la eegayaa qodobkii, marna waxa la eegayaa Beeshii ee waa in lays waafajiyaa. Haddii aan idhaahdo Beel waliba afar (Wasiir) ayay doonaysaa, ma suurtoobayso, ma qaadayso. Laakiin, haddii aan idhaahdo Beel walayba mid qaado oo ay ku qanacdo, way le’egaanaysaa. Waxaanay ku xidhan tahay hadba ogolaanshaha iyo rabitaanka. Markaa waxyaabaha badan ee aad tixgelinayso ee meesha ku jira weeye.”
Gebogebadii, waxaanu waydiinaya Xoghayaha guud in ay jiraan kulamo dambe oo ay u ballan-san yihiin hoggaanka KULMIYE, waxaanu kaga jawaabay oo uu yidhi, “Ilaa hadda umaanu ballamin wakhti kale, laakiin wuu socdaa dee ileen xilligii xilka lala kala wareegayay waa 27-ka Bisha, balse, waa la wada hadlayaa oo wada-hadalku waa furan yahay.”
Filed under kulmiye, xisbi
← Wafdi Uu Hogaaminayey Gudoomiyaha Jaaliyadda Somaliland Ee Dalka Koonfur Afrika Oo Boqasho Uu Ugu Kuurgalayo Xaalada Jaaliyadaha Ku Maray Gobolo Ka Mi
Wasiir ka tirsan Dawladda Ingiriiska oo la kulmay ergooyin ka socda dalal Somaliland ka mid tahay →